North Sound 2-1-1 | Volunteers Of America Western Washington | Everett
खाना असुरक्षा हाम्रो समयको सबैभन्दा प्रचलित सामाजिक मुद्दाहरू मध्ये एक हो। हाम्रो खाद्य बैंक, खाद्य पेन्ट्री, र वितरण केन्द्र सबै हाम्रो समुदाय मा भोक को सामना गर्न अवस्थित छ र साथै अन्य आधारभूत आवश्यकताहरु संग छिमेकीहरु लाई कनेक्ट गर्न टचपोइन्ट्स को रूप मा सेवा।
एजेन्सी साझेदारहरू: के तपाईंले उत्तर साउन्ड २-११-१ डाटाबेसमा तपाईंको जानकारी अपडेट गर्न आवश्यक छ?
2-1-1 कल गर्नुहोस्
हामीलाई यहाँ ईमेल गर्नुहोस्
जब तपाईं कल गर्नुहुन्छ, हाम्रो सूचना र रेफरल विशेषज्ञहरूले आवश्यकताको लागि सही संसाधनहरू फेला पार्न विशेष डाटाबेसमा पहुँच गर्छन्। यो डाटाबेस निरन्तर सम्पादन र सुधारिएको छ, यो सुनिश्चित गरेर कि हामीसँग स्थानीय सेवाहरू र संसाधनहरूमा सबैभन्दा विस्तृत जानकारी छ।
अन्य क्षेत्रहरु मा वाशिंगटन राज्य 2-1-1 सेवाहरूमा जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ?
हामी गर्वका साथ टापु, स्यान जुआन, स्कागिट, स्नोहोमिश, र व्ह्याटकम काउन्टीहरूको गुणस्तर, स्थानीय स्रोतहरूको सेवा गर्दछौं।
Please call 2-1-1 to be screened, Monday through Friday, 9am - 4pm.
२-१-१-१ अमेरिका र धेरैजसो क्यानाडाभरि संचालित हुन्छ? प्रत्येक समुदायमा जहाँ यो संचालित हुन्छ, २-१-११ स्थानीय सेवाहरूको सब भन्दा व्यापक स्रोत हो।
यहाँ राष्ट्रिय 2-1-1 प्रणाली को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
COVID समुदाय आउटरीच सल्लाहकारहरू 2-1-1 को आउटरीच बाहु हो।
टोलीले खाद्य बैंकहरू, सामुदायिक केन्द्रहरू, र अन्य स्थानहरूमा आउटरीच सञ्चालन गर्दछ हाम्रा छिमेकीहरूलाई आधारभूत आवश्यकताहरूको लागि जानकारी र रेफरलको साथ जडान गर्न।
हाम्रो CCOC कर्मचारी विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको लागि सहयोगी हुन्छन् जसका बहुविध आवश्यकताहरू हुन सक्छन् र बिभिन्न सेवाहरू नेभिगेट गर्न सहयोग चाहिन्छ।
CCOC टोलीसँग कनेक्ट हुनका लागि कृपया २-१-१ मा कल गर्नुहोस् यदि तपाईं सेवाहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि भनेर। तिनीहरू व्यक्तिहरूसँग सोमबार-शुक्रवार, बिहान 8 देखि :30::30० र अपोइन्टमेन्टमा भेट्न उपलब्ध छन्।